गिद्द रेस्टुराँमा संरक्षण प्रयास - विदेशबाट - नेपाल
गिद्द रेस्टुराँमा संरक्षण प्रयास
गिद्द रेस्टुराँ । झट्ट सुन्दा गिद्दका परिकार पाइने स्थलजस्ता लाग्छन् । तर, नेपालमा खोलिएका गिद्द रेस्टुराँ गिद्द संरक्षणका लागि खोलिएका हुन्, जहाँ उनीहरुलाई सुरक्षित खानाको व्यवस्था हुन्छ । हुन त पिठौली, नवलपरासीका गिद्द रेस्टुराँ चल्तीका खानपान स्थलजस्ता पनि देखिन्नन्, जंगलझैँ लाग्छन् । त्यहाँ गिद्दहरु सुरक्षित भएर प्रजनन गर्न पाउँछन् । ग्राहक उनीहरुका बानीबेहोरा हेरेर दंग पर्छन् । ती रेस्टुराँमा कतिपय निकै दुर्लभ मानिएका गिद्दका बच्चा हुर्काएर छाडिन्छ, जसले वैज्ञानिकहरुका लागि उनीहरुको अस्तित्वका लागि कत्तिको अनुकूल वातावरण छ भन्ने जानकारी दिन्छ । विशेष स्याहार–सुसारसाथ हुर्काइएका दुर्लभ गिद्द जंगलमै बनाइएको ठूलो पिंजडामा त्यसबाहिर हुर्किरहेका जंगली गिद्द देख्दै बानीबेहोरा सिक्छन् ।
त्यसो त नेपालमा गिद्दलाई फोहोरी चराका रुपमा हेरिन्छ । घरमा गिद्दले टेके शुभ नहुने अन्धविश्वास छ । पर्यटक आउन थालेपछि भने स्थानीयहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ । अमेरिकाको नेसनल पब्लिक रेडियोका लागि डेनियल प्रेइसले आफ्नो सामग्रीमा भनेकी छन्, ‘लोपोन्मुख प्रजातिका गिद्द संरक्षणका लागि संरक्षणकर्मीहरुले नेपालमा अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् ।’
चिहानबाट युवती हराएपछि
महिलाका रौँको चर्चा
कत्रो कपाल !
कार्टुन हेर्ने सजाय
बर्गरकिङको मेनुमा डग फुड
कति महँगा बियर !
बफादार कुकुर [भिडियो सहित]
प्रतिमामा मजाक !